Ka Bixinta Lens-ka Hawlaha Hawlaha on Vimeo.
"Waa adag tahay mararka qaarkood inay ka fekeraan banaanka aadka u adag, aad u mashquulsan, aad u mashquul badan, muraayadaha nolosha oo aad u mashquulsan, laakiin marka aad tagto tiyaatarka, waxa aan rabo waa ... isla markaa oo dhan marka aad si lama filaan ah aduunkaada uga muraayadaha ku xiran adduun weynaha adduunka. " -ADITI BRENNAN KAPIL
Midkeenba waxaan leenahay muraayad gaar ah oo aan u keenno aduunka oo nagu wareegsan. Muraayadahaas waxaa si joogta ah loo qaabeynayaa cidda aynu nahay iyo waxa aan la kulannay, iyo sidoo kale fikradaha aynu ka qabno dadka kale. Way sahlan tahay in la helo nolosheena oo dhan in diiradeena ay noqoto cidhiidhi. Maxaynu ka maqan nahay?
Playwright, jilaa iyo agaasime Aditi Brennan Kapil wuxuu doonayaa in uu ballaariyo muraayadeena adduunka oo dhan, isaga oo ku fekeraya ku filan si loo muujiyo xidhiidhada iyo micnaha cusub - u dhagaystayaasha, nafteeda iyo wada shaqeeyaheeda. Waxay tan samaysaa iyada oo abuuraysa jilayaal iyo sheekooyin qulqulaya filashooyinka iyo beddelidda aragtiyaha.
Aditi, tiyaatarka ayaa ugu horreeya oo ugu horeyn ah oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah. Waa wax aan u baahannahay inaan si wadajir ah ula kulanno, iyo sidan oo kale, waxay u baahan tahay nooc ka mid ah isfahmka hal abuurka ah ee udhaxeeya artistka iyo dhagaystayaasha. Iyadoo ay ka mid yihiin waayo-aragnimo nololeed oo noocyo kala duwan ah, waxaa nalagu dhiirrigeliyay Aditi xushmadda dhagaystayaasheeda. Waxay cayaarteeda wax badan weydiisataa mana ka baqeyso in ay dadka ku qaadato jihooyinka aan la filaynin, iyaga oo aaminsan in dhagaystayaashu ay maareyn karaan mawduucyo iyo sheekooyin badan oo ka badan kuwa badan oo siin doona dhibco.
Habkani wuxuu u muuqdaa in uu yimaado, qayb ahaan, sababtoo ah farshaxanka Aditi wuxuu ku salaysan yahay dhowr "farshaxan farshaxan" halkaas oo ay awood u yeelatey inay sameyso codkeeda gaarka ah sida cayaaraha, iyo sidoo kale iyada oo xiriir la leh bulshada farshaxanka. Mid ka mid ah gurigeeda waa Tiyaatarka Dhiig ee Mixed, halkaa oo ay ku soo bandhigtay laba gabdhood oo dheraad ah, Qofka Jacaylka (2008) iyo Agnes Under the Big Big, buug dheer (2011). Tani waa halka aan ka toogteen Dhejis Lens oo leh Aditi muddada dhawr toddobaad ee bisha Oktoobar.
Dhiifad isku dhafan ayaa ku dhex jirta tijaabada u gaarka ah iyada oo la aamini karo dhagaystayaasheeda. Cusbo cusub Martigelinta Radical barnaamijku wuxuu tikidhada ka dhigayaa dhamaan wax soo saarkooda Mixed Blood oo lacag la'aan ah qof walba iyo qof walba. Nidaamkan sinnaanta ah ayaa ka saaray caqabadda dhaqaale ee dad badan oo wajahaya, wuxuuna beddelay dhagaystayaasha Mixed Blood iyo khibrada masraxa nool ee dhammaan kuwa soo xaadiraya ama ka shaqeynaya marxaladan. Waxay u egtahay in uu yahay shaqo cusub ee Aditi, oo ah saldhig ku yaala Hindu Trinity, wuxuu ku soo bandhigi doonaa guri halkaasoo dhagaystayaashu si run ah u muujiyaan bulshada kala duwan oo ku hareeraysan.
Waa maxay waayo aragnimada tiyaatarka ama qaababka kale ee farshaxanka ah miyay qallafsan yihiin aduunka aduunka? Miyaad ka fikirtaa muraayadaada shakhsi ahaaneed marka aad fanka sameyneysid? Sidee loo ogaan karaa waaya-aragnimada nololeed ee masraxiintu inaga nagu dhiiri galinayso in aynu isku darsanno fikradaheena iyo fikradaheena?